ညီလင်းသစ်: ကျွန်းကလေးရဲ့ ရင်ခွင်မှာ (၅)
Posted by ညီလင်းသစ် au 29.4.13
Bird eye views are awesome.
Still not enough in reading but the story was ended.
သူရိုက်ကိုယ်ရိုက် ပုံကို သိပ်သဘောကျတာပဲ။း) နောက်ဖေးလမ်းကြားက ရွှံ့တွေဗွက်တွေ ပေကျံနေတဲ့ မျက်နှာစာတစ်ခုရဲ့ ပုံလေးကိုလည်း ကြိုက်တယ်။ အစ်ကို့ခရီးစဉ်သာ ဒီနှစ်ထဲ အကောင်အထည်မဖော်ဖြစ်ခဲ့ရင် ဇွန်တို့တွေ့ခွင့်တောင် ရပါ့မလားလို့ တွေးမိသေးတယ်။ မိုင်တစ်သောင်းအကွာမှာရှိတဲ့ တောင်တန်းတွေနဲ့ကုန်းမြေကြားရဲ့ အမှတ်စက်တစ်ခုကနေ ရေပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ ကျွန်းကလေးဆီ တကူးတကလာရောက်လည်ပတ် တွေ့ဆုံသွားခဲ့တဲ့ ကိုညီလင်းသစ်ကိုလည်း ဇွန်တို့ အာဂန္တုကျွန်းသူကျွန်းသားတွေက အမြဲသတိရ ကျေးဇူးတင်နေတာပါ။း))
Did you notice, the big trees along the orchard road are Pa Dauk tree?
ပုံတွေကို သိပ်သဘောကျ၊ စာရေးထားတာတွေကလည်း တင်စား ချောမွေ့လို့။ နောက်တစ်ခါသာ လာမယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့ ကျွန်းသားတွေအနေနဲ့ ခင်မင်ဖော်ရွေမှုငါးစာနဲ့ ကိုညီလင်းသစ်ကို ထပ်မျှားဖို့ ဝန်မလေးပါဘူးရှင့်......း)
ဖတ်လို့ ကောင်းတာ ဗျာမတွေ့ လိုက်ရတာ စိတ်မကောင်းဘူး ကျနော်က
မြင်တာချင်းတူပေမယ့် မြင်တတ်တာချင်း မတူတာ ပင်နီဆူလာပုံက သက်သေပဲ အစ်ကို ။ ပင်နီဆူလာ အဲလို လှ မှန်း အခုမှသိတော့တယ် ။ နောက် ... ယူနီဖောင်း ဝတ်လာပေးကြတဲ့ မော်ဒယ်တွေနဲ့ ရထားတွဲပုံလေး။
မိုင်ထောင်ချီ ကူးလာခဲ့ရတဲ့ ငါးလေးအတွက် အမှတ်တရခရီးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ အာဂန္တုဗျိုင်းတွေကလည်း ဝမ်းသာပါတယ် :)
[ တကယ်ပါ မနေ့ကအထိကို ဗျိုင်းဖြစ်နေသေးတာ :D ]
ဟိ... ဇွန် အမှားလာပြင်တာ။ ကီလိုမီတာတစ်သောင်းဖြစ်ရမှာကို မိုင်တစ်သောင်းလို့ ယူနစ်မှားပြီး ရေးမိလို့။ :D
အစကနေအဆုံးထိလိုက်လာစီးမျောခဲ့တာ အခုတော့ ကျွန်းကလေးရဲ့ခရီးစဉ်လေးအဆုံးသတ်သွားပါပေါ့လား....။ နောက်ထပ်ပို့စ်အသစ်တခုဖတ်ရဖို့ ဘယ်လောက်များစောင့်ရဦးမလဲရှင့်..း)
စလုံးကို အရင်က မီးခြစ်ဖာလေးထဲက အခန်းလေးတွေလို ပြွတ်သိပ်နေတော့တယ်ထင်တာ အစ်ကိုရိုက်တဲ့ ပုံလေးတွေ ကြည့်ရတော့မှ စလုံးက ချက်ချင်းကြီး ခမ်းနားသွားသလိုပဲ ။
အမှတ်တရ ရှိတဲ့အတွက် ကျေးဇူးး)
တိုတောင်းတဲ့ ရက်ကလေးပေမယ့် ရိုက်ချက်တွေအပေါ် ကဗျာဆန်တဲ့ စာသားလေးတွေထပ်ဆင့်ရင်း ကျွန်းကလေးနဲ့ ပတ်သက်သမျှကို စိတ်ဝင်စားအောင် အသေးစိတ်ဖေါ်ကျူးသွားနိုင်တဲ့အပြင် အားလုံးအပေါ် အသိအမှတ်ပြုတဲ့ နှုတ်ဆက်ထားတာလေးကို ဖတ်ရတာ ကြည်နူးစရာပါ မောင်ညီလင်းရေ...
I visit to your blog almost everyday..Ko Nyi..:) hoping that there will beanew post for SG trip.
Now it's all worthwhile, it's interesting post as always.
စင်္ကာပူပိုစ့် အားလုံး စိတ်ဝင်စားစရာတွေချည်းပဲ။ ခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ အကို... အော် ဒါနဲ့ .. မြင်ဘူးသွားပြီ.. :-)
သေသပ်ခမ်းနားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေ၊တင်စားနှိုင်းယှဉ်ထားတဲ့ စကားလုံးတွေ....၊ပြောစရာမရှိအောင် အားလုံးကိုကျေ
အစ်ကိုရဲ့အနုပညာလက်အကြားမှာ လှပနေပုံက မခွဲချင်
Thank you! I would have loved to continue but don't you think that I took already too much time to reach even this stage. :)
ကျေးဇူးပါပဲဗျာ...၊ ဟုတ်တယ်.. အခြေအနေတွေက အမြဲတမ်း ပြောင်းလဲနေတဲ့ ကာလမှာ လူတွေကလည်း နေရာတစ်ခုတည်းမှာ တသမတ်တည်း မရှိနိုင်တော့ဘူး ဆိုတော့ နောက်ဆို တွေ့ချင်မှ တွေ့မှာလို့ ကျနော်လည်း တွေးမိတယ်၊း) မိုင်တစ်သောင်းလို့ မှားရေးတာ ကိစ္စ မရှိပါဘူးလေ၊ ဖြူသီတောင်မှ မိုင်ပေါင်းကုဋေ ဆိုပြီး လုပ်ခဲ့သေးတာပဲ...၊း))
Really?? Oh.. I didn't realize it at all. Well, I think I foundareason to come back to Singapore. :)
ဟုတ်..၊ ကျေးဇူးပါ အစ်မ..၊ အဲဒီလို ငါးစာမျိုးနဲ့သာ ဆိုရင်တော့ ဟောဒီ ငါးတစ်ကောင်က ငါးမျှားတံနဲ့ပဲ မျှားမျှား၊ ကွန်နဲ့ပဲ ပစ်ပစ်... မိမှာ အသေအချာဗျ...၊း)
ကျနော်ကလည်း တွေ့ချင်ခဲ့တာဗျ၊ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ လာမယ်လို့တောင် ထင်နေတာ၊ နောက်တစ်ခေါက်ပေါ့လေ၊း) ပို့စ်အသစ် မတွေ့တာကြာပြီနော်၊ နေကောင်းတယ်ဟုတ်..?
အင်း.. ပင်နီဆူလာ အဆောက်အဦးကိုမြင်ရင် ကျနော်ကတော့ ချဉ်ပေါင်ကြော်တွေကို သတိရစိတ်နဲ့ အကောင်းပဲ မြင်နေခဲ့တာလားတော့ မသိပါဘူးဗျာ၊း) ဗျိုင်း ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့အတွက်တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး ညီမလေးရာ၊ အနည်းဆုံးတော့ လည်တံကျော့ကျော့ ရှိတာပေါ့လေ လို့ပဲ ဖြေသိမ့်ရတော့ မှာပဲ..၊း))
အဲ.. အဖြေရခက်ဆုံး မေးခွန်းကိုမှ မေးရက်ပလေတယ်ဗျာ...၊း)
စင်္ကာပူကို ညီ တင်စားတဲ့ပုံကိုတော့ ကြိုက်သွားပြီဗျာ...၊း) တကယ်တော့ စလုံးက ကျနော် ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေထဲက ထက်ကို ပိုပြီး ခမ်းနားပါတယ်...၊ သတိရခြင်းကတော့ အပြန်အလှန် ပေါ့လေ...နော၊း)
ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ် တီတင့်ရေ..၊ အမြဲပဲ မပျက်မကွက် လာအားပေးလို့လည်း ထပ်ဆင့် ကျေးဇူးပါ...၊
Nyi Ma War So...
Thanksalot Nyi Ma for your patience and kind comment! :) It makes me keep moving.
ကျေးဇူး တင်ပါတယ် ညီမရေ..၊ သြော်.. ညီမက Samsung GALAXY Note II ကို အခုမှပဲ မြင်ဖူးတာလား? ;)
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ၊ အခုလို ကြားရတာ ကျနော်ကလည်း ဝမ်းသာပါတယ်၊ အဲ.. လောလောဆယ်တော့ ခရီးသွားဖို့ ပိုက်ဆံစုလိုက်ဦးမယ်ဗျာ..၊း)
ကျေးဇူး ကိုညိမ်းရေ...၊ အင်း... မကြာခင်မှာ အဲဒီ လှလှပပ စင်္ကာပူလေးကိုပဲ လွမ်းလို့ကျန်ရစ်ခဲ့မှာ အားနာပါတယ်လေ-လို့ ကိုညိမ်းက ဆိုရတော့မှာပေါ့ဗျာ...။း)
ဓာတ်ပုံတွေက တကယ်မိုက်တယ်...ဖော်ရွေပျူငှာမှု ငါးစာတွေနဲ့မိုင်သောင်းချီအဝေးက ငါးလေးကို မျှားတယ်ဆိုတယ့် တင်စားတာလေးကို သဘောကျတယ်...
ထုံးစံအတိုင်း ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လာဖတ်.. ကော်မန့် လာရေးပြန်ပါတယ်..။။
ကိုညီရေ.....ညီမက တကယ့်ကို ဧည့်ဝတ်မကျေနိုင်ခဲ့ သူပါ။။
အရမ်းလည်း အားနာပါတယ်..။။ နောက်တစ်ကြိမ်များ ဧည့်ဝတ်ကျေခွင့်ရမလားလို့... ချောင်းမဆိုးအောင် ခုကတည်းက ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး မှန်မှန်သောက်ထားရ ကောင်းမလားလို့ ..(ချောင်းထပ်မဆိုးအောင်လို့ လေ....။။။ အာ့လိုကို ဧည့်ဝတ်ကျေချင်တာပါ...။။ :P :P :P )
အာ့တုန်းကတော့...ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတောင် စွဲမလိုဖြစ်လို့မနည်းပြန်ဖြတ်ယူရတယ်.... :P :P :P
ကိုညီ့ ပို့ စ်ကိုဖတ် ... ဓါတ်ပုံလေးတွေကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်းကလေးကလည်း ဟုတ်တုတ်တုတ် လျှောက်သွားချင်စရာလေးပါလားလို့ပြန်စဉ်းစားနေမိတယ်။။ ပိတ်ရက်တစ်ရက်လောက်တော့ ကိုညီ့ပို့ စ်အတိုင်း လျှောက်သွားကြည့်ဦးမှ ထင်ပါရဲ့ ...။။ :D :D
စင်ကာပူကဆိုင်တွေမှာ တစ်ရှုး မထားပေးတာ သိလိုက်ရလို. အံ.သြသွားပါကြောင်း၊
ချဉ်ပေါင်ကြော် နှင်. မုန်.ဟင်းခါး အ၀ ၊အမုန်းစားခဲ.မည်ဟု ယူဆရပါကြောင်း၊
ကိုညီလင်းသစ်က တခုခုဆို မိန်းမပျိုလေးတွေနဲ. ခိုင်းနှိုင်းတင်စား တတ်သည်ကိုသတိထားမိပါကြောင်း၊
နောက်ပို.စ် တခု ကိုစောင်.မျှော်လျှက်ရှိပါကြောင်း၊
ကျွန်းကလေးကတော့ အဆုံးသတ်သွားပါပြီ။ကြည်နူးစရာ၊လွမ်းစရာ၊ရယ်စရာ ရသစုံတဲပ အဆုံးသတ်လေးပါပဲ။ ရသစုံတဲ့ ဘ၀ကြီးကို ကျင်လည်ရစဉ် စိတ်ချမ်းသာ၊ကိုယ်ကျန်းမာပါစေ၊ စာများများရေးနိုင်ပါစေ လို့ ဆန္ဒပြုလျှက်
ဓါတ်ပုံတွေ လှလိုက်တာ ကိုညီလင်းရေ… တွေ့နေ မြင်နေကျ မြင်ကွင်းတွေကို မတူတဲ့ Angle ကနေ ရိုက်ပြသွားတာ သိပ်လှတာပဲ… သားလေးနဲ့ မအိမ်သူကိုပါ ခေါ်ပြီး နောက်တခေါက် လာလည်ပါအုံး လို့ ဖိတ်ပါတယ်နော်… အမတို့ မိသားစုကတော့ ကျွန်းကလေးကနေ အဆောတလျင် ထွက်ခွာဖို့ အစီအစဉ် မရှိသေးတာမို့ ကိုညီလင်းတို့ နောက်တခေါက် ရောက်လာဖြစ်ရင်လည်း အတတ်နိုင်ဆုံး ဧည့်ဝတ် ကျေနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကိုညီလင်းရဲ့ ကျေးဇူးမှတ်တမ်းမှာ အမှတ်တရ ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက် အမကလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်…း-)
သား ၂ ယောက်နဲ့အတူ အိမ်ထောင့်တာဝန်တွေ များလှတဲ့ကြားက မဖြစ်မနေ ဖုန်းနဲ့ နှုတ်ဆက်တဲ့
ဟင်းတွေကို ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ မချက်တတ်ပဲ နေ့လယ်ခင်းမှာ တရေးတမော အိပ်တတ်တဲ့ အပျင်းကြီးကြီး မိန်းမကြီး တစ်ယောက်
ခံစားလိုက်ရတယ်။ တွေ့ ကြုံဆုံခွဲ ဆိုတာကို သတိပြုလိုက် မိလို့ ပါ။
ပင်နီဆူလာမှာလည်းသန့်ရှင်းရေးအဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ် တစ်ခါတစ်လေ ညောင်းလို့ တူပါရဲ့ ပရုတ်ဆီတွေလူးနေတတ်တယ် သု့ကိုမြင်ရင် စိတ်ထဲဝမ်းနည်းလာတယ် အစ်ကို့ စာတွေရော ဓါတ်ပုံတွေရောGOODDDD' နောက်ပို့စ်အသစ်တွေ မျှော်နေပါတယ်
As usual, nice travel story! I miss the local foods. Singapore sky line had changed within the last 10 years.
ဒီပို့စ် ကစိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးလို့ ထင်မိပါတယ်...ပုံတွေ လည်းအရမ်းကောင်းပါတယ်...
(...တစ်နေရာ အရောက်မှာ ကိုးရီးယား အမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်က ကျနော့်အရှေ့တည့်တည့်ကနေ ပိတ်ရပ်ပြီး သူ့ရဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့ ဓါတ်ပုံလှမ်းရိုက် လိုက်တယ်၊ တကယ့်ကို ပိုင်စိုးပိုင်နင်း မပြောမဆိုနဲ့...၊ ဘယ်ရမလဲ..၊ သူရိုက် ကိုယ်ရိုက်ပေါ့၊ ကျနော်ကလည်း တစ်ပုံပြန်ရိုက်လိုက်တယ်၊း)...ကိုရီးယားမှန်း ဘယ်လိုလုပ်သိ ....
အမှတ်တရ ဇတ်လမ်း လေးများ ဖတ်ရမလားလို့ပါ...
When I saw your monhingar, I really wanted to eat that kind of mohningar.
You are killing me.:D
I also want to visit there.
Thanks for the beautiful pics and nice writing.
ဘလော့ဂ်ရှိရာ ရောက်မလာဖြစ်တာ ရက်ပေါင်းကြာခဲ့ပြီမို့ အစ်ကို တင်ထားတာကို မသိဖြစ်လိုက်ဘူး...။
ဖတ်နေရင်း မပြုံးဖြစ်တာကြာတဲ့ မျက်နှာက ခပ်ယဲ့ယဲ့ကနေ...သွေးရောင်လွှမ်း...နောက် ကြည်ကြည်စင်စင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြုံးမိတယ်...။
ချစ်စရာ အငွေ့အသက်အရေးအသားတွေနဲ့..အစ်ကိုဟာ “ညီလင်းသစ်” ပီသနေတုန်းပါပဲ...။
သူရိုက် ကိုယ် ရိုက် ပုံကလေးကို ဖန်တီးထားတာလေးကိုလည်း တကယ် သဘောတကျနဲ့ အတော်ကြာကြာကြည့်နေမိတယ်..။
အမျှားခံရတဲ့ ငါးလေးအဖြစ် သရုပ်ဖော်ပုံနဲ့ တင်စား နိဂုံးချုပ်သွားတာလဲ ချစ်ခင်စိတ်နဲ့ ပြုံးမိတယ်..။
မှိုင်းညို့နေတဲ့ စိတ်ကို လန်းဆန်းကြည်လင်သွားစေတဲ့ ပို့စ်အတွက်ရယ်ပါ...။
ဗီဇာမလို၊ လေယာဉ်လက်မှတ်ဖိုး မကုန်ပဲ စကာင်္ပူကို ကိုညီရဲ့ ခရီးသွားအက်ဆေးလေးနဲ့ ရောက်ခဲ့ရတယ်။ အက်ဆေးလေးဆုံးချိန်မှာ သေသပ်စွဲဆောင်မှုကောင်းတဲ့အရေးအသား၊ လှပတဲ့ကင်မရာရိုက်ချက်နဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကြောင့် စိတ်ကျနပ်မှုအပြည့်အ၀ ရရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဆက်လက် စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာ ခရီးထွက်နိုင်ပါစေ၊ ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်နိုင်ပါစေ၊ ခရီးသွားဆောင်းပါးတွေ ရေးနိုင်ပါစေ။
ကျွန်းကလေးရဲ့ ရင်ခွင်မှာ ဆိုတဲ့ စီးရီးလေးကို အစအဆုံး ဖတ်သွားပြီး ပုံကလေးတွေကိုလည်း ခံစားသွားပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်နေနေရတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုအကြောင်းကို အခုလိုလေး ပုံကလေးတွေနဲ့တစ်ဖုံ စာကလေးတွေနဲ့တစ်မျိုး ဝေဝေဆာဆာလေး မြင်တွေ့လိုက်ရတာ ရင်ထဲမှာ ကြည်နူးမှုလေး တစ်ခုဖြစ်ရတယ်။
ဖုန်းကိုယ်စီကို လူတွေအများကြီးက တချိန်တည်း၊ တပြိုင်တည်း သုံးနေကြတာ ဒါပထမဆုံး မြင်ဖူးတာပါပဲ ဆိုလို့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် လာလည်တုန်းကလည်း အဲသည်လို စကားလေးနဲ့ဆင်ဆင် စကားမျိုးကို တအံ့တသြ ပြောခဲ့တာ ပြန် အမှတ်ရမိတယ်။ သူ ပြောသွားတာက " ရထားပေါ်ရောက်ရင် လူတွေအကုန်လုံးက စက်ရုပ်လေးတွေ ကျနေတာပဲနော်။ ကိုယ့်ဖုန်းလေးတွေကို အမြဲငုံ့ကြည့်နေတော့တာပဲတဲ့။ "
ကိုညီလင်းနဲ့အတူ စင်္ကာပူလိုက်သွားရသလိုပဲ ... တကူးတက သွားစရာမလိုတော့အောင် ... ဒါမှမဟုတ် နောက်ထပ် တခါ ထပ်သွားလည်ချင်အောင် ... ရေးလည်း ရေးတတ်ပါပေတယ်ရှင် ... ။